अम्मल कसरी छाड्ने ? यस्तो छ तरिका । – E Kutumba
काठमाण्डौ/ कतिपय मानिसहरुको अम्बल निकै लिइरहने बानि हुन्छ । यसले स्वास्थ्य र पैसा दुबैको नाश हुन्छ । यसकै कारण घर परिवारमा समेत सम्बन्ध राम्रो बन्दैन । आफूले ख्याल ख्यालमै सुरु गरेको चुरोट र रक्सी सेवनले आफूलाई भित्रभित्रै खाइरहेको छ भन्ने उनलाई राम्रै थाहा थियो । उनी बिस्तारै कडा अम्मली भइसकेका थिए । उनी यसको लत छाड्ने प्रयास पनि गरिरहेका थिए । तर, त्यसमा सफल भइरहेका थिएनन । उनले आफ्ना गुरुलाई चुरोट र रक्सी छोड्ने तरिका सिकाउन पटक–पटक आग्रह गरे ।
एकैपटक जबर्जस्ती छाड्दा शरीरलाई हानि पनि गर्न सक्छ भन्दै गुरुले पहिले चुरोट र रक्सी सेवन कम गर्दै जान सल्लाह दिए । उनी आफ्नो बानीमा सुधार गरेर सकभर चुरोट र रक्सी सेवन घटाउँदै जान चाहन्थे, तैपनि उनी सफल भएनन । मनिसमा यसको लत परिसकेपछि छुटाउन निकै गारो हुने सबैलाइ थाहा भएको कुरा नै हो ।
चुरोट त उनी सेवन गर्थे नै । एक दिन उनी रक्सीसमेत सेवन गरेर घर पुगे । घर पुग्नेबित्तिकै उनकी सानी छोरी खुसीले बाबा ! बाबा !! भन्दै अँगालो हाल्न आइपुगिन । छोरी त्यसरी आएको देखेर उनी पनि खुसी भए । उनले पनि छोरीलाई अँगालोमा बेरेर काखमा राखे र अनि म्वाइँ खान खोजे । तर, रक्सी र चुरोटको दुर्गन्धका कारण छोरीले आफ्नो मुख अर्कै्तिर फर्काइन । यस घटनाले उनी निकै दुःखी भए । उनी भित्रभित्रै छट्पटिए । उनले मनमनै त्यस दिनदेखि रक्सी र चुरोट सेवन जसरी भए पनि त्याग्ने अठोट गरे । केही दिनको कठोर संयमपछि उनी त्यसमा सफल पनि भए । त्यस दिनदेखि उनले कहिल्यै रक्सी र चुरोट सेवन गरेनन् । उनी अरू कोही नभई बलिउड सिने जगत्का विख्यात निर्देशक महेश भट्ट थिए भने ती सानी छोरी चर्चित नायिका पूजा भट्ट थिइन । इस कारण आज बाटनै अम्बल सेवन गर्न छोडौँ ।
सोनाक्षी र सलमान,विशेष फ्यानसँग